ဆရာဝန်မှ ရင်သားအား ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ခြင်း - Hello Sayarwon
ဆရာဝန်မှ ရင်သားအား ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ခြင်း
ရင်သားအားကိုင်တွယ်ကြည့်ရှူစစ်ဆေးခြင်းအား အမျိုးသမီးတိုင်းသည် အိမ်မှာ မိမိဘာသာပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းဆရာဝန်တစ်ယောက်၏
ရင်သားစစ်ဆေးမှုမှာ ဆေးပညာအရ ရင်သားအားကိုင်တွယ်ကြည့်ရှူစစ်ဆေးခြင်းဟုခေါ်ပြီး ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးမှသာပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထိုဆရာဝန်သည် ပုံမှန်မဟုတ်သောရင်သား၏ရောဂါ သတိပေးလက္ခဏာရပ်များကိုသိရှိနိုင်ရန်လည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခံထားရသူဖြစ်သည်။
ထိုရင်သားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းသည် ရင်သားကင်ဆာကို စောစီးစွာစမ်းသပ်တွေ့ရှိနိုင်ရန်အရေးကြီးသည်။
မိန်းမတိုင်းသည် အမျိုးသမီးအထူးကုဆရာဝန်မှ ဖြစ်စေ မိသားစုဆရာဝန်မှဖြစ်စေ ထိုစစ်ဆေးမှုကို 1နှစ်(သို့)3နှစ်တိုင်း အသက်20မှ စ၍ခံယူသင့်ပြီး အသက်လေးဆယ်နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ခံယူသင့်ပါသည်။
ရင်သားကိုင်တွယ်ကြည့်ရှူစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အကျိတ်လုံးအများစုကို တွေ့ရှိသွားနိုင်သော်လည်း အတွေ့ကြုံရှိဆရာဝန်၏စမ်းသပ်မှုမှတဆင့်သာ
လူနာမှ မဖော်ပြထားသော သံသယရှိနိုင်သည့် ရောဂါနေရာနှင့် လက္ခဏာရပ်များကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အောက်ပါ အခြေအနေများတွေ့ရှိရပါက သင်သည် သင်၏ဆရာဝန်ကို ရင်သားစစ်ဆေးဖို့ပြင်ဆင်ပေးရန် အကြောင်းကြားသင့်ပါသည်။
သင်၏ရင်သားတွင် အကျိတ်တခုခုပေါ်လာခြင်း (သို့)ပြောင်းလဲမှုတခုခုဖြစ်နေခြင်း ဥပမာ ပုံစံပြောင်းနေခြင်း(သို့)နို့မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော
(အချို့မိန်းမများတွင် နဂိုကတည်းက နို့သီးခေါင်းချိုင့်ဝင်နေတတ်ပြီး ထိုအရာမှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏နို့သီးခေါင်းများတွင် နဂိုပုံမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲမှုရှိပါက သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။)
သင်၏ရာသီကြောင့်မဟုတ်ပဲရင်သားတစ်ဖက် (သို့) နှစ်ဖက်လုံးတွင် နာကျင်ခြင်း၊ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်း၊နို့တိုက်ရခြင်း၊ရင်သား
အစားထိုးထားခြင်း၊ရင်သား၏အသားစအားထုတ်ယူစစ်ဆေးထားရခြင်း၊ရင်သားကင်ဆာမျိုးရိုးရှိခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်ကြသည်။
ရင်သားအားစစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ သင်၏ရာသီပြီးပြီးချင်း 1ပတ်2ပတ်အကြာတွင်သာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်ရာသီလာနေစဉ်အတွင်းတွင် ရင်သားများသည် နာကျင်ရောင်ရမ်းနေနိုင်၍ဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်မှုမစခင်တွင် သင်၏ဆရာဝန်သည် ရာသီရက်များနှင့် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ အပါအဝင်သင်၏ရောဂါရာဇဝင်နှင့် ပတ်သတ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို မေးမြန်းတတ်သည်။
စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်ခါးအထိသင်သည် အဝတ်အစားချွတ်ထားရပြီး စစ်ဆေးစဉ်တွင် သင်၏ဆရာဝန်သည် သင်၏ရင်သားပုံစံနှင့်အရွယ်အစား၊
ပုံသဏာန်တို့ပြောင်းလဲမှု(သို့)ညီညာမှုရှိမရှိတို့ကိုလေ့လာရှာဖွေစစ်ဆေးတတ်သည်။ အချို့သောကိုယ်နေဟန်ထားများကိုလည်း လုပ်ခိုင်းတတ်သည်။
ဥပမာ လက်နောက်ပစ်ပြီး ခါးကိုင်းခိုင်းခြင်း၊လက်မြှောက်ခိုင်းခြင်း၊ခါးထောက်ခိုင်းခြင်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရင်သားများ၏ကွဲပြားနေမှုပုံစံများကို ဆရာဝန်များအားပိုမိုမြင်သာစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရင်သား၏အရေပြားတွင်လည်း ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများ၊ချိုင့်ဝင်ခြင်းနှင့် အနီကွက်များ၊အနာများရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရသည်။ သင်၏ဆရာဝန်သည် နို့သီးခေါင်းကိုညှစ်ကာနို့မှ အရည်များထွက်မထွက်ကိုလည်းစစ်ဆေးတတ်သည်။ အကယ်၍အရည်ထွက်ပါက ထွက်လာသည့်အရည်ကို အနုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်စစ်ဆေးရန် အရည်နမူနာယူထားတတ်သည်။ စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် မည်သို့မိမိရင်သားအားကြည့်ရှူစစ်ဆေးရမည်နှင့် ထိုအလေ့အကျင့်ရှိရန် ကိုလည်း သင်ကြားပေးခံရနိုင်သည်။
သင်၏ရင်သားများကိုထိလျှင်နာကျင်မှုရှိမနေပါက ပုံမှန်အားဖြင့် ရင်သားကိုင်တွယ်ကြည့်ရှူစစ်ဆေးခြင်းသည် သင့်အားနေမထိထိုင်မသာမဖြစ်စေပါ။ ပို၍ပြောရလျှင်ထိုသို့ရင်သားစစ်ဆေးခြင်းသည်မည်သည့်ဘေးဥပဒ်ကို မှမဖြစ်စေနိုင်ပါ။
ဆရာဝန်၏ ရင်သားကိုင်တွယ်ကြည့်ရှူစစ်ဆေးခြင်းသည် ပြင်းထန်သည့် ရင်သားကင်ဆာကဲ့သို့သော ရောဂါများ၏ လက္ခဏာဖြစ်သည့်
အကြိတ်(သို့)ရင်သား၏ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရန်ကူညီနိုင်ပြီး အခြားသော ကုသရန်လိုအပ်သည့် ရင်သားရောဂါများကိုလည်း စမ်းသပ်သိရှိနိုင်ပါသည်။
Clinical Breast Exam. http://www.nationalbreastcancer.org/clinical-breast-exam. Accessed May 18, 2017.
Doctor’s Breast Exam. http://www.webmd.com/breast-cancer/guide/doctors-breast-exam. Accessed May 18, 2017.
Clinical Breast Examination. http://www.webmd.com/women/clinical-breast-examination#1. Accessed May 18, 2017.